ဂဇတ်ရွာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခြင်း.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂဇတ်ရွာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခြင်း..
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on May 7, 2013 in Creative Writing, Myanmar Gazette | 79 comments
အော် ဆယ်အိမ်ခေါင်းရွှေတိုက်ဆိုပြီး ဘယ်သူမှမပေးဘဲ ကိုယ့်ဟာကို တပ်ထားတဲ့ရာထူးအကြီးကြီးကို မမှီမကမ်းအရပ်နဲ. ထမ်းထားရတော့လဲ.. ဟင်းးးးးး
ကဲကြည့်အခုလဲ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရပြန်ပြီ… ဘယ်သူ.ညွှန်ကြားချက်မှ မပါ.. ကိုယ့်ဟာကိုပြဋ္ဌာန်း ကိုယ့်ဟာကိုအတည်ပြုပြီး ရွာထဲ ဖွချင်ရက်စက်စက်ယို ပြီး သန်းခေါင်းစာရင်းကောက်တယ်….
ပုဆိုးခါးတောင်းကျိုက် ကျောက်သင်ပုန်းနဲ. (အခုခေတ်တော့ အိုက်ပက်ပေါ့ဂျာ) တစ်အိမ်တက်ဆင်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တာပေါ့.. အဲအဲ သန်းခေါင်စာရင်းဆိုလို. ညသန်းခေါင်းယံမှာ ကောက်တယ်မထင်လိုက်ပါနဲ….. မနက်အစောကြီး ထကောက်ရတာဗျ… ဘာလို.လဲဆိုတော့ သန်းခေါင်ကောက်လို.ကတော့ မူးအိပ်နေမယ့် ရွာသားတွေ၊ ညအပြင်မထွက်ရအမိန်.ကြောက်ပြီး ကေတီဗွီက မပြန်ရဲတဲ့ ရွာသားတွေ၊ ကိုရီးယားကားကို အသက်နဲ.လဲ ညလုံးပေါက်ကြည့်တဲ့ ရွာသူတွေ နဲ. ဆိုတော့လဲ…. ကျုပ် လူမစုံမှာစိုးလို. မနက်အစောကြီး ထကောက်ရတော့တာပေါ့……..
ကဲကဲ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ရင်မေးမယ့်မေးခွန်းတွေကတော့…
၁။ ဒီဂဇတ်ရွာကို ဘယ်နှစ်ခုနှစ် က စရောက်သနည်း။
၂။ ပို.စ်ဘယ်နှစ်ခု တင်ပြီး သနည်း။
၃။ ရွာ့စည်းကမ်း ဘယ်နှကြိမ် ဖောက်ဖူးသနည်း။
၄။ စတစ်ကီ ဘယ်နှခါရဖူး သနည်း။
၅။ ရွာသူားများ ၀ိုင်းဆဲတာ ခံဖူးပါသလား။
၆။ လူပျိုလား အပျိုလား အိမ်ထောင်ရှိလား။
၇။ ဘယ်နိုင်ငံမှာ နေသနည်း။
၈။ အင်တာနက်ကော်နတ်ရှင် ကောင်းကောင်းဖြင့်ရွာထဲ ၀င်ဖူးပါသလား။
၉။ အိမ်သာတက်ပြီးရင် ရေလောင်းတတ်သလား။
၁၀။ အများသုံးအိမ်သာမှာ အိမ်သာဆေးဘူးသလား။
၁၁။ အရက်၊ဆေးလိပ်၊ကွမ်း သောက်စားတတ်သလား။
၂၂။ သူကြီးပေးတဲ့ လက်ဆောင် အကြီးကြီးတွေ ရဖူးသလား။
၂၃။ သူကြီးကြိုက်တဲ့ ကိုဘေးနွားသား စားဘူးသလား။
၂၃။ ရွာထဲမှာ နာမည်တွေ (နစ်နိမ်း) အများကြီးနဲ. နေနေသလား။
၂၄။ ကော်မန်. တစ်ခုမှ မရဘဲနဲ. နေဖူးသလား။
၂၅။ ထမင်းစားရင် မြန်မာလို ရော ၊နိုင်ငံခြားလိုရော စနစ်တကျ စားတတ်သလား။
၂၆။ လမ်းကူးရင် မျဉ်းကြားကနေ စနစ်တကျကူးဖူးသလား။
၂၇။ လမ်းမှာ အမှိုက်၊ ကွမ်းတံတွေး ကိုစနစ်တကျထွေးဖူးသလား (သို.) လူပေါ်သို.ကွမ်းတံတွေးထွေးဖူးသလား။
၂၉။ ဂဇတ်ချစ်သူများစာပေဆု ရဖူးသလား။
၃၀။ ရွာထဲဝင်မရလို. သူကြီးကို ဘယ်နှခါ ကြိမ်ဆဲဖူးသလဲ။
၃၁။ သူကြီးဆီက အမှတ်တသိန်း ရဖူးသလား။
၃၂။ အခွန်ဆောင်ပြီး အလုပ်လုပ်သလား။
၃၄။ ဂျီအက်စ်အမ်၊ စီဒီအမ်အေ၊ ဆယ်လူလာ၊ ဒဗလူစီဒီအမ်အေ၊ ကြိုးဖုန်း ထွက်သမျှအကုန်သုံးဖူးလား။
၃၅။ ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ဘာလို.ထင်လဲ။ (ဥမမာ။ ။ လစ်ဗရယ်သမားလား၊ မျက်ကန်းမျိုးချစ်လား၊ သူများပြောတိုင်းခေါင်းငြိမ့်သမားလား၊)
၃၆။ တကယ်လို.ဒီရွာကနေ နယ်နှင့်ဒဏ်ပေးခံရရင် သင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။
ကဲ အဲဒီ မေးခွန်း ၃၆ ခုကို မှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေပါ…….. မဟုတ်တန်းတယား ဖြေသူများအား ၁၅၀၀ ဆင်းကဒ် ကံစမ်းမဲစာရင်းမှ ထုတ်ပယ်မည်ဖြစ်ပြီး……….. ၁၀သိန်းတန် ဖုန်းများ ပြန်လည်လက်ခံ လျော်ကြေးပေးပါက အဲဒီ စာရင်းမှ ထုတ်ပယ်မည်ဖြစ်သည်။…….
ခေတ္တ ယူနိုက်တက်စတိတ်အော့ဖ် သာကေတ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရက်သမားသမ္မဂ အမှုသောက်ဆောင်
ဒီမိုရွာကွ … ဖြေဘူး ..
မဖြေရင် ၁၅၀၀ ဆင်းကဒ် ရဒေါ့ဘူး…..ဒါဘဲ… ထောက်ခံစာလဲ မပေးဘူး.. ဒါပဲ..
မေးခွန်းတွေက ဆယ်တန်းလို ၃ နာရီစာ မကလို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြေမယ်လေ နော့ ၊
အမည် ။ ။ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
လူမျိုး ။ ။ ကါ့ဗျား ( ကျုပ်အမေ သူယူခြင်တဲ့လင်သူယူလို့ ဒီဘဝရောက်သွားတာ တတ်နိုင်ဘူး )
ဘာသာ ။ ။ ဟိန္ဒူ ဗုဒ္ဓ ခရစ် အစ္စလာမ် တစ်ခုမှမယုံတော့ဘူး
အော် ကိုအောင်ပု ပြတ်ပြတ်သားသားကိုဖြေသွားလိုက်တာပါလား…….. ကောင်းဒယ် ဘယ်သူ.မှမယုံဒါကောင်းဒယ်…..
အော် ကိုအောင်ပု ကဗျားဖြစ်ရတာ အမေ့ကြောင့်ကိုးးးးးးးးးးးးး ဟဟဟ
” ၂၈ ။ မိန်းမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသနည်း ”
တရားဝင်ကို မေးတာလားဟင် ။
ငယ်ငယ်တုန်းကလို သူငယ်ချင်း ခြေချောင်း လက်ချောင်း လေးတွေပါ ငှားရမလို ဖြစ်နေပြီ ။ ဟီ ဟိ ။
အဘရေ…….. ဖြေချင်သလိုသာဖြေ….. ဒီက ချင့်ယုံတတ်တယ်……. အဟိ..
ဆယ်အိမ်ဂေါင်းဂျီး ကိုယ်ဒိုင် ကွင်းထဲဆင်း ငါးဖမ်း ဖားဖမ်း လာတာ ဆိုဒေါ့ဂါ
ကျီနုတ်က သေသေဂျာဂျာ ဖြေပေးရဒေါ့မှာပေါ့ …
၁။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်တစ်ထောင်ခန့်မှ
၂။ ၃၀၀၀ ကျော်
၃။ အကြိမ် ၅၀၀
၄။ ၃၄၃ ခါ
၅။ ((ခံ)) ဖူးပါဘူး
၆။ ကလေး တစ်ဒါဇင်
၈။ ရက်စ်၊ နိုး
၁၀။ ရက်စ်၊ နိုး
ဂုလို စိတ်ရှေလက်ရှေ ဖြေပေးဒဲ့အတွက်
လာထား ဘက်စ် ကော်မန့် ….
ထပ်ပြီးဒေါ့ ဖြေရရင် ….
နင့် တာမီးလေးကိုလည်း ကြိုက်တယ် …
ကြီးလာရင် ကားတင်ပြေးမယ် … ဒဒိထား …
ရွေးပေးလိုက်ပါတယ်…. နာတမီးယေားမမွေးသေးပဲ စပွန်ဆာရနေတော့ကားးးးးး
ကားတင်ပြေးရင်တော့… တက်စီ လုပ်တဲ့ မာဇဒါ ဒယ်မီယို တို.၊ စူစိကီး စွပ်စ် တို.၊ ဟဲရီယာ တို. နဲ.တော့ရဘူးနော်…. လက်ခ်ျဆက်တို.၊ ဘီအမ်ဒဗျူလူ တို.မှရမှာ…
~~~~ သမီးရယ် ကြိုက်လိုက်ပါသမီးရယ်… ဟိုကကောင်က မျက်နှာလေးထောင့် ကြိုက်လိုက်ပါသမီးရယ်…
မေးခွန်းက ၃၆ ခုတဲ့…
၁၁ ကနေ ၂၂ ကို ခုန်ကူးသွားတာ…ဆိုတော့
ဟုတ်ဘူးအာဒါ သေချာလုပ်ထားဒါ အထာလေးဒွေရှိတယ် ဟဲဟဲဟဲ…..
ကြားထဲမှာ လူချင်းတွေ တိုးတိုးတိတ်တိတ်မေးခွန်းလေးဒွေရှိတယ်လေ…….. ဟာ.. ဂယ်ပဲ ဂယ်ပဲ ပိန်းပအေ………. ညည်းနှယ့်… ခိခိခိ
ဆယ်အိမ်ခေါင်းရယ် ရွာသူားတွေကို စက်စက်ရက်ရက် မေးရက်ပါပေတယ်။
မေးပေ့ါ ရှင်က ဆယ်အိမ်ခေါင်းကိုးးးးးးးး
ဒါပေမယ့် ကျောင်းတက်လာတဲ့ တလျှောက် စာမေးပွဲမေးခွန်းရဲ့အဖြေကို (က) (ခ) လောက်ပဲ ရွေးလာရတော့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရထားအုံနာကြီးကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ………… :hee: :hee:
ဆယ်အိမ်ခေါင်းကိုတောင် နိုင်နိုင်တဲ့ အာဏာပါဝါကြီးပါလား။
ဂေါင်ကြီး ( ၁၀ အိမ်)
အရင်ဖြေပြမှ မီးမီးတို့ လိုက်ကူးလို့ရမှာပေါ့
12ကနေ21 အထိ ဖြေပေးနော်
အော် ဆယ်အိမ်ဂေါင်းကို ပြန်ကြပ်နေပြန်ပါပီအေ………မုန်းထာဟွန်..
အဲဒီ မေးခွန်း အပျောက်ဆယ်ခုက လျှိုဝှက်ပါဆိုအေ……… မမနိုနော် နိုမှာဂျ………..အဟင့်
၁။ သာသနာ သက္ကရာဇ် ၂၅၅၅ ခုနှစ်မှာ စပီးမန်ဘာ ဖြစ်ပါတယ်။
(မန်ဘာမဖြစ်ခင် ၃/၄ လလောက် ကတည်းက ရွာထဲကို ရောက်ဖူးပါတယ်)
၂။ ကျနော် ရေးထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုအတွင်းကို ၀င်ပီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၃။ အသေးအမွှားလေးတွေကတော့ ခဏခဏပါပဲ။ အကြီးမားဆုံးကတော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ
ပို့စ်မတင် ကွန်မန်း မရေးပဲ အမှတ်တိုးနည်း ဆော့ဖ်ဝဲ စမ်းကြည့်ဖူးပါတယ်(မအောင်မြင်ပါ)။
၄။ သေချာတော့ မှတ်မိတော့ဘူး။ ကျနော်တင်တဲ့ ပို့စ်တိုင်းလိုလို ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၅။ တစ်ခါတစ်ရံ အရိုင်းအစိုင်း လေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ ကြုံဖူးပါတယ်။
၆။ လူပျိုလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ မပျိုတော့ဘူးလို့လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၇။ ဟေးလားဝါးလား သမားတွေများတဲ့/ မင်းသားကြီးမလုပ်ရ ပတ်မကြီးထိုးဖောက်မယ်ဆိုသူတွေများတဲ့
တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတဲ့/ အစစအရာရာအကုန်လုံးနီးပါး ဈေးကောင်းပေးဝယ်ရတဲ့/
လူ့အခွင့်အရေး ကျကျနနမရှိတဲ့/ လုပ်ခလစာ အင်မတန်နည်းပါးပီး အလုပ်အင်မတန်ရှားတဲ့/
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ထူထောင်သော်ငြားလည်း အခွန်အတုပ် အလွန်များပြားတဲ့
ကား စသဖြင့် လူစီးယာဉ် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အားလုံး၊ ဖုန်း စသဖြင့် နည်းပညာပစ္စည်းအားလုံး
လူတန်းစေ့မသုံးစွဲနိုင်အောင်(ဈေးနှုန်းအင်တန် ကြီးမားအောင်) ပြုလုပ်ထားတဲ့….. စသဖြင့် … စဖြင့်….
၈။ ၀င်ဖူးပါတယ် မြန်မာ ၁၅ သိန်း ၅ သိန်း ၂ သိန်း ၁၅၀၀ တန် ဘာနံပါတ်စ. ဘာနံပါတ်စ စသဖြင့် ဆင်းကဒ်တွေနဲ့ သုံးတိုင်း
ဖေ့ဘုတ်တို့ ဘာတို့ တော်တော်များများ ဖွင့်မရတာကလွဲရင် ကော်နတ်ရှင်ကောင်းပါတယ်။
၉။ ဒီမေးခွန်းကတော့ ကျနော်နောက်မှာအမြဲးတန်းရှိတဲ့ ဘော်ဒီဂတ်တွေ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့ ကျနော် ဖြေလို့မရပါဘူး။
၁၀။ နဲဗား… တစ်ခါမှကို မလုပ်ဖူး စိတ်တောင် မကူးခဲ့ဖူးပါဘူး။ ကိုယ်ကသာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လုပ်ထားခဲ့ဖူးတာ များပါတယ်။
၁၁။ နံပါတ်ဖိုးဟုခေါ်ဆိုသော ဂျုံမှုန်ကဲ့သို့ အရာများကို၎င်း၊ ချိတ်ပြားကဲ့သို ဆင်တူရိုးမှာရှိသော ဘိန်းမဲ ဟူသည်ကို၎င်း၊
ဘာမီတွန် ဆေးပြားနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် တူသည့်၊ ရာမ(ထိုင်းလို ဆေးပြား) ၊ ပဲလှော်၊ ချိုချဉ်၊ ကျောက်ခဲ၊ မြင်းဆေး ၊ ကျွဲးဆေး
ခွေးဆေး၊ နွားဆေး ၊ စိတ်ကြွဆေး၊ စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ စသဖြင့် ပစ်ညက်တွေ အမျိုးမျိုးတပ်ထားသည့်
အပြားလေးများကို၎င်း၊ ကြက်သားချက်ထဲတွင် မဆလာခတ်သကဲ့သို့ ခတ်ထည့်ပါက ကြက်သား အမြန်နူးစေသည့်
ဖက်ကြမ်းဆေးလိပ်ထဲတွင် ထည့်ပီး သောက်လို့ရသည်…. ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟုခေါ်သော……..
ဂန်ဂျာ အရွက်များကို၎င်း၊ ဆယ်လုံးပါ တစ်ကဒ် နှစ်ကဒ် သုံးကဒ် စသဖြင့် အဆမတန် သောက်သုံးပါက
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို အရှိန်များတက်လာတတ်သည့် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများကို၎င်း၊
အရက်၊ ဆေးလိပ် ၊ ကွမ်းယာ ၊ ဆေးပေါင်း၊ ကွမ်းပေါင်း၊ ခိုင်နည်း ၊ စသဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးနီးပါကို
ဘေားဆရာ ကပေ သင်ပေးလို့ လုပ်ဖူးပါတယ်………. (အခုတော့ ကွမ်းယာ နှင့် ဘီယာ အရက်သာ သောက်ပါသည်)
၂၂။ သူကြီးပေးတဲ့ ဆုလာဘ်ထဲမှာ အကြီးမားဆုံးဆုကတော့ သူ၏ သမီးတော်လေးကို ကျွန်ုပ်နှင့်
ထိမ်းမြှားလက်ထပ်ပေးဖို့ ကျွန်ုပ်၏ မိဘများထံ သူကြီးကိုယ်တိုင် လာရောက်စကားကြောင်းလမ်း သည့်အရာကို
၂၃။ အထက်ပါ ၂၂။ အဖြေမှ သူကြီးလာရောက်စဉ် လက်ဆောင်ပနှာ အဖြစ် ယူဆောင်ခဲ့သောကြောင့်
၂၃။ နစ်ခ်နိမ်းတွေ အများကြီးနှင့်ပင်မက အကောင့်တွေ အများကြီးနှင့်ပင် နေဖူးပါကြောင်း။
၂၄။ အမြဲးတမ်း အခု ၁၀၀ ကျော်ရရှိပါကြောင်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါသာလျှင် ၉၉ ခုပဲရရှိဖူးပါကြောင်း
ပို့စ်တင်ပီး စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်းလောက်သာ ကွန်မန်း တစ်စောင်မှ မရပဲဖြစ်ဖူးပါကြောင်း။
၂၅။ ထမင်းငတ်နေတာ အတော်ကြာပီဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုစားဖူးလဲ မမှတ်မိနိုင်တော့ပါကြောင်း။
၂၆။ စနစ်တကျ ကူးလိုသော်ငြား လူကူးမျဉ်းကြားက လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင်မရှိ(မလိုအပ်သည့်
အရှိန်လျော့တုံး စလိုးဒေါင်း များသာအလွန်ပေါးများသဖြင့်) ယာဉ်ရှင်းလျှင်ရှင်းသလို ပြေး၍သော်၎င်း
ကြုံသလိုသော်၎င်း တိုက်ခံရလည်း အရော်တောင် ရ၏ဟုဆိုသည့် စိတ်မွေး၍ ကူးဖြတ်ဖူးပါကြောင်း။
၂၇။ မိမိအိမ်မှာနေလျှင်တော့ စနစ်တကျ ပြုလုပ်ပါသည်။ လမ်းမှာဆိုရင်တော့ ကြုံသလို စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပါ၏
လူပေါ်ကို ထွေးချရလောက်အောင်ထိတော့ နမော်နမဲမနေ မရမ်းကား( ထိုးခံရမည်ကို လည်းကြောက်ရသဖြင့်)
၂၈။ နိုး… လုံးဝ (လုံးဝ) အခါ ဆယ်ငါးသန်း တစ်ယောက်မှမရှိပါကြောင်း ယုတ်မာစွအဆုံး
ဆယ်ပေပတ်လည်အတွင်း မျှပင်နီးနီးကပ်ကပ် နေခဲ့ဖူးသည့် မိန်းကလေးမရှိအောင်
ကျွန်ုပ်ဖက်မှ သတိတရားကြီးမားစွာ ရှောင်ရှားခဲ့ပါကြောင်း။
၂၉။ မန်ဘာဝင်ပီးသည်မှစ၍ ပို့စ်တင်သည့်လတိုင်း အမြဲးတမ်း ရရှိဖူးပါကြောင်း။
၃၀။ အနန်ဒေါး အနန်ဒ ဂိုင်းဝင် ယောက်ခမဂျီးဖစ်သည့်အတွက် ပစ်ဆာနန်ဒိယ ကန်ထိုက်မည်ကိုလည်း ကြောက်သဖြင့်
တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှပင် မပြုလုပ် စိတ်ဖြင့်ပင် မပစ်မှားခဲ့ဖူးပါကြောင်း။
၃၁။ ကျွနိုပ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ၉၉ ပုံ ၉၈ ပုံ သည် သူဂျီးထံမှ ရရှိထားသည့် အမှတ်တစ်သိန်းများ သာဖြစ်ကြောင်း။
၃၂။ ဖွန်ကြောင်၍ အခွန်ဆောင်ရသည်များသာ ရှိပီး။ လိုင်စင်မဲ အလုပ်လုပ်ပါကြောင်။
၃၃။ မိမိခြေထောက်ပေါ် မိမိရပ်နိုင်သည့်( တစ်နှစ်သားကျော်ကျော်) အချိန်မှစ၍ အမွေခွဲပေးဖို့ တိုက်ပွဲဝင်
ဆန်ဒပြ ၁၈ နှစ်ပြည့်သည်အထိ မအောင်မြင်သဖြင့်။ အိမ်မှလွယ်လင့်တကူ ခိုးယူလို့ရရှိသည့် ရွှေတိုငွေစ
အနည်းငယ်ကို ခိုးယူပီး အိမ်မှထွက်ပြေးနေရပါကြောင်း။
၃၄။ မိမိနှင့် လားလားမျှ မဆိုင်သကဲ့သို့ ၀ယ်ယူရအင်မတန်ခက်ခဲ ဈေးကြီးသည့် နောက်တစ်မျိုး ပေါ်ပေါက်
ထပ်မံ ရောင်းချလာလျှင်လည်း ခွေးရှုံး နွားရှုံး ရှုံးတတ်သည့် အသုံးပြုနေလျှင်လည်း
အကုသိုလ် များရသည့်ပစ္စည်းများကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှပင် အသုံးမပြုဖူးပါကြောင်း။
၃၅။ လစ်ဗရယ်မျက်ကန်းပုတ်သင်ညို သမားတစ်ခုမှ မဟုက်။ ကြုံရင်ကြုံသလို မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်
အကျိုးရှိနိုင် အခွင့်အရေးရနိုင် သည့်လုပ်ငန်းများ… လူထင်ကြီးခံရနိုင်လောက်သည့် လုပ်ငန်းများကို
၃၆။ နယ်နှင်ဒန် ပေးခံရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်က ရွာအပေါ် သံယောဇဉ်မပြတ်နိုင် အမှတ်တစ်သိန်း
ထပ်မံရှာချင်စိတ် ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ မလိပ်တစ်ပတ်နည်းနဲ့ ကာရိုက်တာ ပြောင်းပြီး ပြန်ဝင်လာမပေါ့…..
အခြားတော့ ဘာမှအထွေအထူး ခံစားချက်မရှိပါဘူး… အင်း…ဒါပေမယ့် …ရပီးသား အမှတ်လေးတွေကိုတော့
ထမင်း ၁၆ ရက်လောက်စားမ၀င်နိုင်အောင် နှမျှေားမိပေမပေါ့……………….
ဆယ်အိမ်ခေါင်းအရှိန်အ၀ါသုံးပြီး မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်တွေက များလှကြည်လား။
ပြီးတော့မေး မကောင်းတဲ့မေးခွန်တွေကပါလိုက်သေးတယ်၊ ဘာတဲ့ လူပျိုလား အပျိုလား အိမ်ထောင်ရှိလား။
မိန်းမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသနည်းတဲ့။ အဲဒီအပြင်ဆိုးတာက အင်တာနက်ကော်နတ်ရှင် ကောင်းကောင်းဖြင့် ရွာထဲ ၀င်ဖူးပါသလားတဲ့ ဒါမထီမဲ့မြင်မေးခွန်ဘဲ ခုတလော ရွာသူ/သား(ပြည်တွင်းနေ)တွေ ရွာထိပ်မှာ ရွာထဲဝင်မရလို့ တီးတိုးညံနေတာ အဲဒီ ကွန်ကိစ္စဘဲဗျာ။ အဲဒီတော့ ဆရာကြီး ဆယ်အိမ်ခေါင်း သင် မသိလို့ မေးလေသလား ဆင်ချင်မေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် လူစုက ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲလုပ်ရပါလိမ့်မည် ဒါဘဲ။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲလုပ်လို.ကတော့ ကော်မရှင်ဖွဲ. စစ်ဆေးပြီး ခေါင်းဆောင် ကိုခင်ခအား… ဘာညာကွိကွ လုပ်ပလိုက်မှာ…….ဟွင်းဟွင်းဟွင်း….
ရော့.. ၁၅၀၀ (လက်သိပ်ထိုး.. လူမသိ သူမသိ).. ဆင်းကဒ်မဲပေါက်လည်း ခင်ဗျားပဲယူထားလိုက်နော်
မေးခွန်းအားလုံး ကျုပ် ဖြေပြီးပြီးဘီလို့ စာရင်းတို့လိုက်ပါဗျာ.. ဟီး ၁၅ သိန်းတန်ဖုန်းတွေ ငွေပြန်အမ်းရင် ကျုပ်ကို ထိပ်ဆုံးက ပေးပါဗျာနောာာ
အော် ကိုရွာစားကျော်ရယ်… ကျုပ်က မရလို.ပါ .. ရရင်လုပ်ပေးပါတယ်ဗျာ.. မရလို.ပါ
ကိုရွာစားကျော်ကို ကျုပ်က ထိပ်ဆုံးမှာ ထားပေမယ့် ကျုပ်ထိပ်ပို.ပေးတာတပိုင်းပေါ့ ဆုံးဖြတ်မှာက သူကြီးဗျ.. အဲဒီတော့ သူကြီးကိုလဲ………….ဟဲဟဲဟဲ
(အဲလိုဘဲ မျှစားရဒါပေါ့ဗျားးးးးးးးးးးးးးး ခီးခီးခီး)
ဆယ်အိမ်ခေါင်း မေးချင်ရာမေး တာမီးလည်း ဖြေချင်ရာဖြေမယ်။
– ဟင်းချက် ၂ ယောက်
– မီးပူတိုက် တစ်ယောက်
– ပန်းကန်ဆေး တစ်ယောက်
– ဒရိုင်ဘာ ၃ ယောက်
– လူဖော်လောင်ဖက် တစ်ယောက်
အနော်ကလား။ အိမ်မှာ လူပြည့်သွားလို့ နေစရာမရှိလို့ အဆောင်မှာ ငှါးနေနေတယ်လေ။
ဟင် ဒါ သက်သက် အရပ်ကို စော်ကားဒါ… ဒီမယ် ဆယ်အိမ်ခေါင်း ကို အရပ်ကလေး နှစ်ပေ့တစ်လက်မနဲ. မခန်.လေးစား လာလုပ်တယ်ပေါ့….
ဒီမယ် ဒီမယ်… ရွှေတိုက်တဲ့ လာမစမ်းနဲ.နော်… တစ်တိုက်ထဲ ရှိတယ် နှစ်တိုက်ရှိရင် ငှားစားပစ်မယ်… ဟွင်းဟွင်းဟွင်း..
မေးနေတာကတမျိုး သူဖြေချင်တာဖြေသွားဒယ်… မုန်းထာအေ….ဟွန်.
ဖြေ= အဲ့ဒါ သေချာမှတ်မိတာပေါ့…
ကျုပ်သမီး မိကဲ ရည်းစား စထားတဲ့နှစ်..
သူ့ခြေလှမ်းတွေသိချင်လို့ အင်တာနက်ထဲလှည့်မွှေရင်း ဒီရွာထဲ ခြေချော်လက်ချော်ရောက်လာတာ…။
လူပျိုကြီး သမီး ရည်းစားထာတာ အင်တာနက်ထဲရှာစရာလား… ဒီက သမီးမွေးမလို.ဟာ ဦးပါလုပ်မှ ဖင်ကျိမ်းဒယ်……..အဟင့်အဟင့်
တကယ်တက်တာက လေးငါးဆယ်ပဲ ရှိသေးတယ်…
ရွာစည်းကမ်းဆိုတာ ဘယ်တုန်းကရှိလို့တုန်း…….. ဟင်….
ကျုပ်ပို့စ်တွေက ဘုန်းကံကြီးတော့ ဘုန်းကံနိမ့်တဲ့လူတွေ ကပ်လို့မရဘူး…
ဘာမှတ်လဲ.. ဟွင်း…. ဟွင်း….
ဘဲဒီး အော့ဖဲန်း ပေါ့ကွယ်…
ကိုယ်က အနေအထိုင်လဲ မတတ် ၊ အပြောအဆိုကလဲ သိတဲ့အတိုင်း
ရွာသားတစ်ယောက်ကတော့ လူပျိုကြီး ဆိုပြီး ကြော်ငြာပေးဘူးတာပဲ….
အခုတောင် မကြာခင် မြို့နယ်ရုံးသွားလောင်းရဦးမှာ….
ဖြေးဖြေးပြောဦးပါ ဖြေးဖြေးချင်းနားနားပြီးပြော နော်နော်….
ကျုပ်လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေ အလစ်ဆိုရင် – အလုပ်မှာ
သူကရော တကယ်စားဖူးလို့လား.. ?
အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်တုန်းကတစ်ခါပဲ မ၀ါးပဲ မြိုဖူးတယ်…
လူပေါ်ကို ကွမ်းတံတွေးတော့ အထွေးခံရဖူးတယ်…
ကိုဘလက်ချောတို့၊ ကိုနိုဇိုမိ တို့ရဲ့အဖြေအတိုင်းပဲ…….
ဘုရားစူး၊ မိုးကြိုးပစ်၊ ဟိုဒင်းလေးနဲ့ ဟိုဟာပြုရစေရဲ့ ……
အဲဒါက လူကြိုက်လောက်တဲ့စာရေးမှ ရတော့မပေါ့ ……
သူ့ရွာလေး ဆယ်လံခြောက်ခွက်လောက်ကို အလုအယက်ဝင်ချင်တဲ့ ကျုပ်တို့အပြစ်….
ကျုပ်တို့က အခွန်ကို တိုက်ရိုက်လဲဆောင်ရတယ် သွယ်ဝိုက်လဲဆောင်ရတယ် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆိုပြီးတော့ နားလှည့်ပါး၇ိုက်ခံပြီးတော့လဲ ဆောင်ရပါ့…….
နေ့ လားး ည လားးးးး
ရင် နာ စရာတွေဟာ…..
အသစ်….. ဖြစ်…. ပြန်တယ်…….
((((( ဆရာကြီး ))))))
ရွာအ၀င် ပိုစ့်အဖွင့် လော့အင်အ၀င်အတွက်စောင့်ရတဲ့ အင်တာနက်ဘိုးလေးတွေကို
လှူလဲလှူ၊ စားလဲစား၊ နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်လဲ အမွေပေးခဲ့နိုင်တာပေါ့ ……
နံဘတ် ၆ နဲ့ နံဘတ် ၂၈ မေးခွန်း …
ထိုမေးခွန်း နှစ်ခု ဖြေဆိုပုံကို ထောက်လိုက်သော် ..
မိန်းမ အလစ်တွင် သူ့ကိုယ်သူ လူပိုဂျီးဟု ပြောပြောနေတတ်သူဂျီး ပါတကား ဟူ၍
ကျွန်ုပ် တွေးမိလေဒေါ့ဒဒီး .. ဟီး .. ဟီး ..
ဟူးးးးးးးးး ဦးပါ အဖြေတွေဖတ်ရမှာ မေးမိတဲ့ ဆယ်အိမ်ခေါင်း မျက်ရည်တောက်တောက် ကျသွားရပါပေါ့လားဗျာ…..
အော် ဦးပါရယ်…. အဟင့်အဟင့်..
အနာပေါ်တုတ်ကျတဲ့ မေးခွန်းတွေများ ကျွန်တော်မေးမိလေသလားရည်လို. ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ပြန်မေးမိပါပေါ့လား….. တောက်တောက်တောက်(မျက်ရည်ကျသံ)
ဆယ်အိမ်ဂေါင်း ကတိုက်စိုး …
… ချိ ….
စကစ်တီ ဘယ်နှခါ ရဖူးလဲ …
… နင့် ညက်လုံး ကန်းနေဒလားဟဲ့ ….
ဟုတ် မကန်းပါဘူး…. ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ..
ဒါနဲ. အခုပြောနေတာဘူလေးလဲ အဲဒါ ဘူလေးလဲ…
မိမိဖာသာ မိမိ ပေးထားသော ဆည်အိမ်ဂေါင်းကြီး။ (ခ)ရာထူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရက်သမားသမ္မဂ အမှုသောက်ဆောင် ဂျီးခင်ဂျာ
အနော်တို့ နယ်စည်းမခြား အ၇က်သမား သမဂ္ဂအတွက် သန်းခေါင်းစာရင်း အဲ အရက်သမားစာရင်းလေးများရှိရင် ကောက်ခံပေးပါရန် ပန်ကြား
နယ်စည်းမခြားဂေဇက်အရက်သမား သမဂ္ဂ၀င်များ ကိုယ်စား…
အယက်သမား သမဂ္ဂ နံမယ် ယူသုံးချင်ရင် မူပိုင်ခွင့် အရင်တောင်းသင့်ကြောင်း….
..ကျုပ်တော့တထောင့်တညပုံပြင်လိုကျောရမယ်နဲ့ တူပါတယ် …
အဲဒါ က စပိုင်လေ စပိုင် သူကြီးမသိလိုက်ဘူးလား။
၁။ ဒီဂဇတ်ရွာကို ဘယ်နှစ်ခုနှစ် က စရောက်သနည်း။ (အမေ့ ဘိုက်ထဲမှာကတည်းက )
၂။ ပို.စ်ဘယ်နှစ်ခု တင်ပြီး သနည်း။ (များလွန်းလို့ မမှတ်မိ)
၃။ ရွာ့စည်းကမ်း ဘယ်နှကြိမ် ဖောက်ဖူးသနည်း။ (လူလစ်လျင်လစ်သလို)
၄။ စတစ်ကီ ဘယ်နှခါရဖူး သနည်း။ (နှခါတော့ မရဘူး ဘူး နှမ တော့ ရချင်တယ်)
၅။ ရွာသူားများ ၀ိုင်းဆဲတာ ခံဖူးပါသလား။ (ကိုယ့်ရှေ့မှ လာမဆဲတာ ဘယ်သိမလဲအေ့)
၆။ လူပျိုလား အပျိုလား အိမ်ထောင်ရှိလား။(ဘာလာလာလာလာလာလာလာလာ)
၇။ ဘယ်နိုင်ငံမှာ နေသနည်း။( သူကြီးအားမလိုအားမရဖြစ်နေတဲ့နှစ်တစ်ထောင်ကျိန်စာမိနေတဲ့နိုင်ငံ)
၈။ အင်တာနက်ကော်နတ်ရှင် ကောင်းကောင်းဖြင့်ရွာထဲ ၀င်ဖူးပါသလား။( ဓါးထိုးခံချင်တယ်နဲ့တူတယ်)
၉။ အိမ်သာတက်ပြီးရင် ရေလောင်းတတ်သလား။ (မလောင်းဘူးပါ ခြုံထဲဝင်ပါတော့ရေလောင်းစရာမလို)
၁၀။ အများသုံးအိမ်သာမှာ အိမ်သာဆေးဘူးသလား။ ( အိမ်သာရေဆေးတယ်ဆိုတာ ဘာပြောတာလဲမသိ)
၁၁။ အရက်၊ဆေးလိပ်၊ကွမ်း သောက်စားတတ်သလား။ (လူမှန်ရင် အကုန်လုပ်ဖူးရသတဲ့)
၂၂။ သူကြီးပေးတဲ့ လက်ဆောင် အကြီးကြီးတွေ ရဖူးသလား။(ရဘူးတယ် မိတိုက်ဆိုတဲ့ကောင်လူကြုံယူလာခဲ့တာလေ ကရိန်းငှားပြီး သယ်ခဲ့ရတာတဲ့)
၂၃။ သူကြီးကြိုက်တဲ့ ကိုဘေးနွားသား စားဘူးသလား။ (ကိုဘေးနွားတော့ မသိ ကိုဘနွားဘဲစားဘူးတယ်)
၂၃။ ရွာထဲမှာ နာမည်တွေ (နစ်နိမ်း) အများကြီးနဲ. နေနေသလား။(နစ်နိမ်းတော့မရှိဘူး ကီးဘုတ်နိမ်းဘဲရှိတယ်)
၂၄။ ကော်မန်. တစ်ခုမှ မရဘဲနဲ. နေဖူးသလား။ (များမှများ×
(အခုတော့ တရုပ်လို တူနဲ့ဘဲစားတယ်)
(ကျုပ်နေတဲ့မြို့က မျဉ်းကျား မရှိဘူး)
( ပက်လက်လှန်ပြီးကိုယ့်မျက်နှာပေါ် ကျအောင်ထွေးဘူးတယ်)
(မေးခွန်း မပြည့်စုံ၍ ဖြေရန်မလိုပါ -လူမိန်းမ ပြောတာလား ကိုယ်နဲ့အတူအိပ်တဲ့မိန်းမပြောတာလား
တစ်ပါတ်တစ်ခါ အတူအိပ်တဲ့ မိန်းမပြောတာလား နာရီပိုင်းနဲ့ အိပ်တဲ့မိန်းမပြောတာလား တိကျစွာမေးပါ)
၃၀။ ရွာထဲဝင်မရလို. သူကြီးကို ဘယ်နှခါ ကြိမ်ဆဲဖူးသလဲ။( ဒီလိုနိမိတ်ပြပေးခွန်းများ မေးခြင်းကို တားမြစ်ပါသည်)
၃၁။ သူကြီးဆီက အမှတ်တသိန်း ရဖူးသလား။( တသိန်းတော့ မသိဘူး တစ်သိန်းတော့ သိတယ်)
၃၂။ အခွန်ဆောင်ပြီး အလုပ်လုပ်သလား။( မေးစရာ ရှားလာအေ့)
၃၃။ မိသားစုနဲ.အတူနေသလား။ (ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲကျန်)
(လကတက ဖသ လို့ထင်ပါတယ် )
တိန် မေးခွန်းတွေ အကုန် လျောလျောရှူရှူဖြေလာပြီးမှ နောက်ဆုံး အုအုသန်းရှာဆိုတဲ့ မေးခွန်း မမေးမိပါလား ဂျာ……. ပိုဖြေတွားဘီ…….ဟိဟိဟိ…
လကတက ဖသ ကြီး လေးပေါက်ရေ.
ကွန်းမန့်ပေးချင်တာ ။ ဘာပေးရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။
မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ။ သန်းခေါင်စာရင်းကောင်ပြီးရင်။
ဒီမယ် ဆယ်အိမ်ခေါင်း ကိုရွှေတိုက်…
ရွာထဲမှာ အရပ်အမောင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီး ဟိုမေးသည်မေး လျှောက်မမေးပါနဲ့…
ကျုပ်နာမည် ဦးကျောက်ခဲ၊ မကျေနပ်ရင် ဂေါင်းချင်းပြိုင်တိုက်မလား… အား ဟိ
ဟိုက ကလေးတစ်ယောက်တောင် ရနေဘီ …
ဂေါင်းချင်းပြိုင် ဥငေးဘဲ ရှုံးလိမ့်မယ် …
ဟီး .. ဟီး …
နာ နင့် လုပ်ကျွေးနေဒါ များနေဘီနော် …
ဘောပေါက် .. တောင်မ …
သိပါတယ် သိပါတယ် ကျောက်ခဲရေညှစ်ဘာမှမထွက်ဘူး….. အရက်ပဲထွက်မယ်ဆိုတာ…
အရပ်ကိုမစော်ကားနဲ.နော် ယအက နဲ. တွေ.သွားမယ်………ငှဲငှဲငှဲ..
ဦးကျောက်ခဲ့ဒဲ့ နာမယ်ကိုက မာရေကျောရေနဲ… ဟိဟိဟိ..
ပေါ တစ်လီ တစ်ပေါ
ပေါ နှစ်လီ နှစ်ပေါ
ပေါ သုံးလီ မောင်ပေ
ကိုပေါ လို.အများခေါ်တယ်… ဘောချာချာလူတစ်ယောက်ရယ်..
သူဘောလောင်းတဲ့အိမ်က ဘောပွဲဒိုင် သဋ္ဌေးသမီးကို
ရင်မှာ မျိုသိပ်ဖစ်ညှစ်ရှာ လောင်းရှာလေတော့တယ်….
ကိုပေါက်နဲ့ တွေ့ မှ…မှတ်ကရောထို့ တောင်….
ကြံကြံဖန်ဖန်….တွေးတတ်တဲ့ ကိုရွှေတိုက်နဲ့ ….
ကြံ ကြံဖန်ဖန်ရေးတတ်တဲ့ …ကိုပေါက်
တွေ့ မှတွေ့ တတ်ပလေတယ်….
ခင်ရှို.ချတာ ချိတ်ချိုးပါဘူးအေ…….ချချ… အမငီး အသဲယားထာ………
ရွှေတိုက်တို့ ကတော့..လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ။
ဖြေသေးဘူး…။ ပြန် စဉ်းစားရဦးမယ်..။
ဟာဂျာ တိုဂျီးကလယဲဂျာ ဟာဂျာ… လုပ်ပါဘူးဂျာ တစ်ခါတည်းပါဂျာ
ဟောင်ဟောင် ရှဲရှဲညိသွေးပချိ အာာာာာာာာဘွားးးးးးးးးးးးးးးး :hee:
လျှို့ ဝှက်မေးခွန်းများသာ ဖြေဆိုမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ……
ဒါဆို လျှို.၀ှက်တွေ.ဆုံ စကားပြောမှရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း………. ညနေဘယ်ဆိုင်မှာတွေ.မလဲ ကိုရင်ဆာမိ…
ညနေတိုင်း ညတိုင်း ဂျူတီဝင်ရပါသဖြင့်
နေ့ လည် 1 နာရီမှ ညနေ3နာရီအတွင်းသာ ….
မင်္ဂလာဒုံ လေတပ်ရိပ်သာအနီးရှိ “”ကောင်း”” လက်ဘက်ရည်ဆိုင်၌ ရှိနေတတ်သည် ဖြစ်ပါကြောင်း …
ရီရဒယ်…ဟား..ဟား…ဟားးးးးး။ ဟာသစာအုပ်ငှားမဖတ်တော့ဘူး..။ ရွာထဲပဲ ၀င်မွှေတော့မယ်…။
တိန် သူပြောမှ သများလဲ လူပြက်လုံးလုံးဖစ်တော့ဒါဘဲအေ……… ဒီက အတည်ပြောဒါ အတည်ပြောဒါ.. လာမနောက်နဲ.နော် ငိုမှာဗျ……….. ဗြဲဗြဲ
နံပတ် (၂၈) သည် ရွာသူများဖြေဆိုရန် မကိုက်ညီပါ… ယောက်ျားများအတွက်သာဖြစ်သည်… ထို့ကြောင့်… တစ်ဖက်သတ်ဆန်သော မေးခွန်းဖြစ်ပါသဖြင့် မည်သည့်မေးခွန်းကိုမှ ဖြေဆိုတော့မည် မဟုတ်ပါဂျောင်း..
(ဟိဟိ… အဲ့လိုပဲ မဖြေရအောင် ပတ်ရှောင်ကြည့်တာ.. ရမလားလို့..)
အောင်မလေးလေး မဖြေချင်မဖြေချင်ဘူးပြောဘာအေ…….. မေးခွန်း ၂၈ ကို ထပ်ဖြည့်ရင် ယောင်္ကျားဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲ မေးလို.မှ မရဒါအေ့.. ဆင်ဆာမိသွားမှာပေါ့….
ဘယ်နှယ့်အေ……… နာမေးထည့်လိုက်ရ နာဒေါ့မယ်……… ဟွင်းဟွင်း
မေးသာမမေးတယ်.. အုခ် … သူလုပ်မှ ပိုဆိုးတော့တယ်..
အလီဘာဘာနဲ့ ခိုးသား xxx
၀ှစ် ..၀ှစ်.. (ပေါက်ဖော် အမှတ်တရ…)
မတိဝူး..လစ်ဘရယ်ပဲ..မေးမယ့်မေး မျှမျှတတမေး… ခိခိ… (အနိုင်ပိုင်းတာ..)
စကားအတင်းစပ်..ကြော်ငြာဝင်ရင်တော့ ခုချိန်ထိ..အော်မေ့ဂိုဏ်းဝင်ဘာ… ဒါဗျဲ… :harr:
ဦးတိုက်ကလဲ…၁၀အိမ် ဂေါင်းကြီး ဖစ်နေပြီး ဒီလောက်ဒေါကြီးရလား….။ စိတ်လျှော့ပါ….။
အော်သမီးရယ် ၁၀အိမ်နဲ.ဂေါင်းကိုတွဲပြောရဒယ်ကွယ့်…. သမီးက ခွဲပြောတော့ အုအု ဟိုဒင်းကြီးဖစ်တွားမှာပေါ့လို……… အဟင့်အဟင့်အဟင့်
မေး။ ။၃၄။ ဂျီအက်စ်အမ်၊ စီဒီအမ်အေ၊ ဆယ်လူလာ၊ ဒဗလူစီဒီအမ်အေ၊ ကြိုးဖုန်း ထွက်သမျှအကုန်သုံးဖူးလား။
ဖြေ။ ။ဘာဖုံးမှ အပိုင်မရှိဘူး။ ၁၅၀၀ cdma လည်း ရာအိမ်မှူး နဲ့ မတည့် လို့ မဲ မပေါက်ဖူး။
မနေ့က အားရပါးရ ဖြေထားတယ်
ဒါပေမင့် မှားနှိပ်မိတာ ပျက်သွားပြီ
ဒါကြောင့် အခု ပြန်ဖြေတယ်
နှစ်တစ်ထောင် ကျိန်စာ မိနေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အမြန်ဆုံးလို့ ဆိုရမယ့် ကော်နက်ရှင်နဲ့ပဲ သုံးတယ်ကွယ်
အကုန်လုံးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေမယ်ဆိုရင်ရော …
ဘာဒွေများဆုချမှာပါလဲ ဦးဂေါင်းကြီး ချင့် ….
ဆုတော့ချမှာပေါ့အေ……ဒါပေမယ့် ဆယ်အိမ်လေးတော့ ပြန်ဖြည့်ခေါ်ပါအေ.. ညည်းနှယ့်
ဘယ်နှယ့် ဂေါင်းကြီးချင့် ဒုံး……. အဟင့် အသဲယားထာ……..
မယ်ဘုတ် ပြောတာ နည်းလမ်းမှန်တယ်။
သူများ တွေ ဆီ မှာ ဆိုရင် အဲလို မေးခွန်းတွေ ဖြေရင် အနည်းဆုံး ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးတယ်။
ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးရင် ဖြေမယ်။
၁၅၀၀တန် ကံစမ်းမဲစာရင်းထဲ ထည့်ပေးပါမယ်ဆို…….. ဇွတ်..
မေးခွန်းတွေ အပြီး မှတ်ချက်တွေ ကို ကျော်ဖတ် မိလို့။
နာ့ကွန်နက်ရှက်နဲ့ဖြေရရင်တော့အေ။ ဒီမေးခွန်းတွေဖြေဖို့ ၁၀ နှစ် ၁၀ နှစ်ဆိုတာလိုဖြစ်နေဘီအေ။ ကွန်နက် ရှင်များပြောချင်ပေါင်။ ရွာထဲဝင်မရတာ ၃ရက်ရှိပြီ။ နောက်နေ့မှဖြေမယ်အေ။ ဖုန်းကဒ် နာ့ဖို့ထားလိုက်
ကိုတိုက်စိုးမေးခွန်းတွေက အတ္တကျော်ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက
လူတွေရဲ့ စိတ်သဘောကို လှည့်ထားတဲ့အမေးပုံစံမျိုးလေးတွေပဲ…
ရဖူးပါတယ်.. ပန်းရင့်ရောင်တီရှပ်အင်္ကျီပါ… အဆင်ကလည်း ဒီရုပ်ရည်ကို နုလို့ထင်တယ်..
ပေါင်၁၇၀ ခန်ဒါကိုယ်နဲ့ မတော်လို့ အမှတ်တရ.. တကူးတက ကမ္ဘာပတ်သယ်နေကြောင်းနဲ့…
နောက်များ ကံထူးလို့ ရခဲ့ရင်လည်း ကြီးကြီးလေးတွေသာ အားလုံးကို လက်ဆောင်ပေးစေလိုပါကြောင်း။
ရွာထဲက ရွာသူားများအားလုံး ဆိုဒ်… အကြီးကြီးတွေသာဖြစ်ကြောင်း..
မေးခွန်း၂၈ ကို ဖြေသွားမယ် တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးးးးးး တစ်ခါတည်းဖြေထားမယ် အဲ့ဒီမေးခွန်း နှောင် လေးငါးနှစ် မမေးနဲ့ ဒါဗြဲ
သန်ဒိတ်ထန် ချထားဒါယား ဟင်……….ဟိဟိ
သူဂလေးကျတော့လေ .. ရွာထဲဝင်တာ ၁လစွန်းစွန်းလေးပဲရှိသေးတော့လေ
ဒီတော့ဂါ….ဖြေလို့ရလားလို့ပေါ့နော် .. အဲဒါ အရင်လာမေးတာ
အမလေး ၁လမကလို. ၁ပတ်ဖြစ်အုံး ဖြေလို.ရပတော်……….
ရွှေတိုက်တို့များ လည်ချက် ဇနီးရမှကော်မန့်များများရတဲ့ ပို့တင်ပြီ
ဟုတ်ကဲ့ မဆိုးပါဘူးခင်ဗျ….. မှန်တာစွတ်မပြောနဲ.နော် ရွာပြင်ထုတ်ခံနေရအုံးမယ်……ဟိဟိဟိ